पत्थरीको लागी अचुक औषधी हो घरमै पाइने गहत, हेर्नुहोस् यति धेरै छ्न फाइदाहरु…पूरा पढि सेयर गर्नुहोस । – Nepal Online Khabar
अ’धिकांश मानिसहरमा अहिले प’त्थरीको समस्या देखिने गरेको छ । प’त्थरीको समस्या देखिनुको मुख्य कारक खा’नपीन नै हो । खानपीनमा विशेष ध्यान नदिँदा धेरैलाई मि’र्गौलामा प’त्थरीको समस्याले सताउने गर्छ । मृ’गौलामा प’त्थरी भइसकेको छ अथवा हुने जोखिम छ भने प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउने गर्नाले पत्थरी बन्ने खनिज पदार्थ पिसावमार्फत बाहिर जान्छ । गहतलाई कुलथी पनि भनिन्छ । गहत खानाले प’त्थरी फाल्छ भन्ने कुरा अधिकांश नेपालीलाई थाहा भएको कुरा हो । ग’हतको सेवनले कि’ड्नी स्टोन फाल्दछ । प’त्थरीको उपचार गर्दा हमेसा कडा औ’षधि प्रयोग गरेको पाइन्छ । घ’रेलु औषधिमा गह’त पनि एक हो । प’थरीको उपचार गहतले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे जानकारी पाउनु आवश्यक छ । ग’हतमा भिटामिन ए पाइने भएकाले पत्थरी बन्नबाट रोक्ने काम यसले गर्दछ । हाम्रो विचार सस्तो सुलभ आफ्नै घरमा भएको औषधि नदिएर हामीले महंगो औषधि सेवन गराउदछौं ।
यस्तो छ गहतको दाल खाने तरिका: १। गहतको दाल २५० ग्राम ल्याउनुहोस् । राती ३ लिटर जति पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र बिहानै हल्का आगोमा ४ घण्टा पकाउनुहोस् र शुद्ध घिउले झान्नु होस् त्यसमा कालो मरिच, सिधेनुन, जीरा, हलेदो हाल्नुहोस् १० एमएम सम्मको पत्थरी झार्दछ । प’त्थरी हुदा के खाने के नखाने: १. प’त्थरी हुँदा गहत, खरबुजो, मूला,अमला, मूंङको दाल, चौलाई भाजी खाने । दैनिक ७,८ गीलास पानी दैनिक पिउनु पर्दछ । पत्थरीमा के नखाने: १.मासको दाल, मेवा, चक्लेट, माछा, मासु, चिया, भेण्टा, टमाटर आदि खानुहुदैन ।
सा’वधान ! चि’या पिएप’छि यी ३ ची’ज न’खानुहोस् ! हरे’क दिनको सु’रुवात हामी मध्ये धेरैको चि’याबाट हुन्छ । बिना चीया बिहान र बेलुका कल्पना पनि गर्न स’क्दैनौ । एकपटक चियाको बानी लागेमा त्यसको लत लागिरहन्छ र समय समयमा खोजिरहन्छ । कामकाजी मानिसहरु आफ्नो कामको थकान मेटाउनलाई पनि चिया पिउने गर्छन् । चिया पिउनाले हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै लाभ मिल्छ । चियामा हुने एं’न्टीअक्सिडेन्टले केही प्रकोपबाट रक्षा गर्छ । यसको साथै चियामा अन्य पनि धेरै त्यस्ता तत्व हुन्छन जसले शरीरलाई ला’भ पुर्याउछ ।
Prevआफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस.. पूरा पढि जानकारीको लागी सेयर गरौ !
Nextक्वारेन्टीनमा बसेका वडाध्यक्षको स्वास्थ्य चौकीमा दा’रुपाटि…हेर्नुहोस् ।
अमेरिकाको निर्वाचनमा किम जोंग उनको प्रवेश, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारी नोक्सान हुन सक्ने…हेर्नुहोस् ।